Taariikh Nololeedkii Cumer Carte Qaalib (1930 ilaa 18-Nov-2020 )
Saturday November 21, 2020 - 10:33:10 in Wararka by Wariye Tiriko
Taariikh Nololeedkii Cumer Carte Qaalib
(1930 ilaa 18-Nov-2020 )
Markii kacaanku la wareegay talada Soomaaliya , waxa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibeda 1969 , waxa uu noqday Madaxa gudiga golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay 1972 , Sannadkii 1972 ayuu heshiisiiyay Uganda iyo Tanzania oo dagaal iyo colaadi soo kala dhex gashay , sannadkii 1974 waxa uu Soomaaliya ku daray ururka jaamacada Carabta . Waxa uu xilka wasiirka arrimaha hayey illaa 1977.
Waxa uu madax u ahaa gudidii Bangladesh iyo Pakistan ay u saartey jamacada carabtu ee xalka ka dhigey in ay laba dawladood noqdaan.
Dabayaaqadii 77-kii waxa uu noqday Wasiirka Hidaha iyo Tacliinta Sare Soomaaliya, isagoo noqday guddoomiye ku-xigeenka Golaha Shacabka Qaranka , xilal safiirnimona hore ayuu u soo qabtay.
Dabayaaqadii 77-kii waxa uu noqday Wasiirka Hidaha iyo Tacliinta Sare Soomaaliya, isagoo noqday guddoomiye ku-xigeenka Golaha Shacabka Qaranka.
7 June 1982, Cumar Carte Qaalib iyo 6 siyaasi oo kale ayaa laga qaaday xilalkii ay ka hayeen dawladda iyo xisbigii hanti-wadaaiga kacaanka Soomaaliyeed ,
Sareeyo Guuto Ismaaciil Cali Abokor
Sareeyo Gaas Cumar Xaaji Masale
Gaashaanle Sare Cismaan Maxamed Jeelle
Warsame Cali Faarax (Warsame Juquf)
Maxamed Yuusuf Weyrax iyo
Maxamed Aadan Shekh, ayaa laga qaaday xilalkii ay ka hayeen dawladda iyo xisbigii hanti-wadaaiga kacaanka Soomaaliyeed ,
waxaana 7 February 1989 waxa lagu xukumey dil laakiin dilkiisa waxa baajiyay cadaadis ka yimi beesha caalamka iyo ururada u dooda xuquuuqda aadamaha , waxaana loogu badelay xabsi.
Amarkii Cumar Carte Qaalib amray ciidanka dawlada Soomaaliya ee la dagaalmayay SNM , USC iyo SPM ayaa ahaa " dhamaan ciidamada dawlada ee jooga waqooyiga (Somaliland) waa inay isku dhiibaan SNM, kuwa jooga gobolada dhexe iyo Banaadirna waa inay isu dhiibaan jabhadii USC, kuwa jooga Bay iyo Jubbooyinkuna waa inay isku dhiibaan SPM."
waxaana uu arkayey taasi xal nabad horseedi kara oo colaadaha lagu afjaro.
Cumer Carte Qaalib waxa uu kale oo uu soo qabtay xilal dhawr ah oo kala duwan , xilkii ugu horeeyey ee uu qabto xornimada ka hor ama shaqadii waxa ay ahayd kaaliye Gudomiyaha Degmada Hargeisa " assistant District councillor " waxa uu xiligii Somalia noqday safiir, wasiirka waxbarashada , Arimaha dibada ilaa Raisal wasaare.
Cumar wuxuu ahaa gabyaa, kaasoo ku gabya Carabida, suugaanta Sooamalidana waxbuu kasamayn jiray barigii hore.
Waxa xusid mudan in Cumer Carte uu waxbarasho dib uga galay dalka sucuudiga oo uu jaamacatul madiina Al islaamiya wax ka bartay taasi oo ku tusaysa dedaalka iyo shaqsiyada cumer Carte ee xaga waxbarashada iyo aqoonta , jaamacadaasi awgeed ayuu u iman kari waayey xiligii Madaxwayne cigaal geeriyooday isaga oo ahaa shaqsiyaadka kaliya ee waayo aragnimo siyaasadeed iyo aqoonba la bidayey.
Cumer Carte Qaalib waxa uu dhalay inta aan aqaano 6 wiil iyo 6 gabdhood oo maanta iyaguna dadka ay dhaleen iyo kuwa ay sii dhaleenba isa soo gaadheen .
Cumer Carte Qaalib waxa uu ahaa shaqsi diinta aad ugu wanaagsan, hadal wanaagsan naxariis badan, dad jecel, waxa uu dad badan dheer yahay in uu ahaa shaqsi ka balaadhan qabiil iyo meel hoose oo dadku u siman yihiin.
Markii uu ahaa murashaxa Madaxwaynaha sanadkii 2002 ayaan galab u tagey waxa uu iiga sheekeeyey taariikho layaab badan, isaga oo noo sheekaynaya ayaa waxa noo soo galay rag waaweyn oo wada gaboobay, waxa uu igu yidhi awoow ninkaasi gaboobay saw ma arkaysid aabihii ayaanu isku xisbi aheyn 1960kii , waa xisbigii Ubax .
Waxa uu yidhi maanta aniga magac, aduunyo iyo wax walba binu adenku jecel yahay waan soo gaadhay waanan soo taabtay, kaliya waxa i wadaa waa xil aan is leeyahay dalkaagaa iyo dadkaagaa wax baad maanta tari karaysaa ....
By; Mohamed Cabdi Jaamac ( Dhimbiil )